एचआइभि संक्रमितहरुको पीडा र कथा सुनेर किन रोईन् गायीका केशु गुरुङ ?( कारण यस्तो छ ) - Jerung Films
एचआइभि संक्रमितहरुको पीडा र कथा सुनेर किन रोईन् गायीका केशु गुरुङ ?( कारण यस्तो छ )
wwwjerungfilmswwwjerungfilms4Jul 2018
जेरुङ फिल्मसर संवाददाता,२०,आसार–काठमाडौं । पेसाले स्वास्थ्यकर्मी केशु गुरुङ पछिल्लो समय गीत संगीतमा निकै चर्चाको शिखर बनेका छन् । कौरा गायन थालेको करिब एक दशक नाघिसकेको छ । ‘पेसा स्वास्थ्यकर्मी भएपनि रहर र रुचिले गर्दा यस क्षेत्रमा समेत प्रवेश गरेको उनले बताइन्
तनहुँको तनहुँ, धरमपानीकी केशु दमौलीस्थित ‘कम्युनिटी सर्पोट ग्रुप’ नामक गैरसरकारी संस्थामा हाल आबद्ध छिन् । जसले एचआईभी एड्ससम्बन्धी कार्य गर्छ । आफ्नो पेसाबाट बचेको समय गायनलाई दिदै आएकी केशुका बजारमा आएका गीत मध्य ‘आँशु तालमा’, ‘धरमपानी’, ‘बन्दीपुरमा रोदी जमाउँला’ जस्ता लोक केही दिन पहिले ‘बुकी फूल’ बोलको एक कौरा गीत रेकडिङको सिलसिलामा उनी काठमाडौ आएकी थिइन् ।
‘बुकी फूल’ बोलको गीत पहिल्यै देखि रेर्कड गर्ने सोच थियो । तर, समय अहिले मिल्यो ।’ भेटमा उनले भनिन् । यो गीतमा उनलाई दुर्गा गुरुङले समेत स्वरमा साथ दिएकी छन् ।अन्य गीत भन्दा कौरा गीत नै रुचाउने उनका अधिकाम्स गीत कौरा रहेका छन् । तनहुँ, लम्जुङ र गोरखा तिर बढी चल्ने भनेकै कौरा गीत भएको उनको भनाई रहेको छ ।
उनी कौराको अलवा चुट्का र घाटु पनि गाउँन सिपालु छिन् । ‘कौरा, चुट्का र घाटु भनेको हाम्रो गुरुङ समुदायको संस्कृति हो’ उनले थपिन् ‘कौराविना गुरुङ कला र संस्कृति अधुरो हुन्छ । लिम्बूमा धान नाचमा ‘पालम’ गाए जस्तै तमु गुरुङले रोधी बस्दा कौरा, चुट्का र घाटु गाउँने गरिन्छ ।’ उनले थपिन् ‘म पनि गुरुङ समयदायकै भएकाले आफ्नो कला संस्कृति जर्गेनाका लागि कौरालाई प्राथमिकता दिएकी हुँ ।
औपचारिक रुपमा उनले २०६१ सालदेखि गायन थालेकी हुन् । ‘आँशु तालमा’ बोलको लोक गीत मार्फत गायन सुरु गरेकी उनले कौरा भने स्कुलले जीवनमा पनि गाउथिन् रे । ‘पढ्दैदेखि कौरा गाउँथेँ । गाउँमा रोधी बस्दा म पनि नाच्न र गाउन जान्थेँ’ उनले सुनाइन् ‘तर, अहिले आफूलाई गायिका भन्दा पनि स्वास्थ्यकर्मी एवं समाजसेवी भन्न रुचाउँछु ।’
बिगत ६ वर्षदेखि उनी स्वस्थ्य पेसामा समेत आवद्ध छिन् । पढाइ सकेसँगै २०६९ सालदेखि स्वास्थ्य सेवामा उनले जागिरे जीवन सुरु गरेकी हुन् । गायन र स्वास्थ्य फरक पाटो रहेको बुझेकी उनले गायन भन्दा बढी प्रथामिकता पेसालाई दिने गरेकी छन् ।
‘पेसाको कारणले उनी एचआईभी एड्स संक्रमितहरुको सेवामा दिनरात खट्नुपर्छ । समय–समयमा फिल्डमा पनि जानुपर्ने हुन्छ’ भनिन् ‘गायन रहर र रुचि भएकाले समय मिलाएर गाउँदै आएको छु ।’ पेसाका कारणले उनी धेरै पटक रोएकी छन् रे । काम गर्न गाहे भएको कारणले उनी रोएकी भने होइन । ‘एचआइभि संक्रमितहरुको पीडा र कथा सुनेर म रोएकी हुँ’ उनले रुनुको कारण खुलाइन् ।
पेसाका कारणले दैनिक जीवन चलाउन उनलाई सजिलो भएपनि चर्चा र सुन्टुष्टी भने गायनबाट मिलेको छ । ‘गायन मिडिया क्षेत्र भएकाले चिनिन केही गाहे छैन ।’ उनको अनभव हो यो । आफुले अहिलेसम्म गाएको गीत सबै श्रोता तथा दर्शकले मन पराएको उनको बुझाइ छ । थोरै गीत गाउँने तर राम्रो गर्ने उनको गायन सिदान्त हो ।
बिबाह गर्ने उमेर पुगेपछि बुबाआमालाई भार हुनु सोभाविक नै हो । यो उनले पनि बुझेकी छन् । व्यस्ताको कारणले बिबाह गर्न नभ्याएको बताउने उनकी बिबाह गर्न लगन र साइत पनि नजुरेको सुनाउँछिन् । बिबाह जहिले भएपनि नारीलाई सम्मान गर्ने पुरुष मात्र आफ्नो बर बन्न योग्य हुने उनको धरणा रहेको छ ।